Godzilla Vs. Kong မှာ Godzilla နိုင်မယ်ဆိုတာ ‌သေချာပြီလား? | Mandalay Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Mandalay | Mandalay Yellow Pages
Godzillaနဲ့ Kong ဆိုတာက ပရိတ်သတ်တွေကြားမှာ နာမည်ကြီး ရေပန်းစားတဲ့ ဇာတ်ကောင် (၂) ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဇာတ်ကောင် (၂) ကောင်က ဇာတ်လမ်းတစ်ခုတည်းမှာ တိုက်ခိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်သူတွေက ထင်မှာလဲ? အခုတော့ တကယ်တိုက်ခိုက်ကြတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်းအားကြီးတဲ့ Godzillaနဲ့ Kong မှာ ဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတာက တကယ့်ကို စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းလွန်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဇာတ်လမ်းရဲ့ လှည့်ကွက်တွေကလည်း ရှိနေတော့ ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့ မရပါဘူး။ ဒါဆိုရင် ဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတာကို အားသာချက် အားနဲချက်တွေ ယှဉ်ပြီး ခန့်မှန်းကြည့်ကြရအောင်။
Godzilla က တခြားသတ္တဝါတွေထက်ရော Kong ထက်ရော အရွယ်အစားကြီးပြီး သန်မာပါတယ်။ Godzilla ထက် Kong မှာကတော့ အသိဉာဏ်ပိုရှိပြီး တိုက်ရည်ခိုက်ရည် သာပါတယ်။ တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာ အကောင် အရွယ်အစားက အဓိက မဟုတ်ပါဘူး။ တိုက်ပွဲဆိုတာက ဗျူဟာသာပြီး ဉာဏ်ပိုကောင်းတဲ့ သူကနိုင်စမြဲမို့လို့ပါ။
Kong: Skull Island မှာကတည်းက Kong က အရင်အရွယ်အစားထက် ပိုပိုကြီးလာခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် Godzilla နဲ့ယှဉ်ရင်တော့ သေးနေတုန်းပါပဲ။ Godzilla ကတော့ Godzilla: King of the Monsters မှာ သူ့ရဲ့သန်မာမှုတွေက အဆုံးစွန်ထိရောက်ရှိခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ပြိုက်ဘက်တွေကို မေးရိုးတွေဆွဲဖြဲ သတ်ပုတ်ပြီး သူ့ရဲ့ အမြှီးနဲ့ရိုက်တာက သူ့ရဲ့ အားသာချက်တွေပါ။
Kong က Godzilla နဲ့ယှဉ်ရင် အကောင်သေးပေမယ့် သူ့ရဲ့ သန်မာမှုတွေကို အသုံးချပြီး ရန်သူတွေကို ကိုင်ပေါက်လွှတ်ပစ်ခြင်း၊ လက်သီးနဲ့ထိုးခြင်း၊ ကန်ခြင်း၊ ခုန်ပြီးချနိုင်ခြင်း၊ ပစ္စည်းတွေကို အသုံးချပြီး ရန်သူကိုအနိုင်ယူဖို့ ကြိုးစားခြင်း စတဲ့ စွမ်းရည်တွေရှိနေပေမယ့် Godzilla ကို ကိုင်ပေါက်ဖို့အတွက်ကတော့ သူ့အတွက် မဖြစ်နိုင်လောက်ပါဘူး။
Kong ရဲ့ ပုံမှန်တိုက်ခိုက်ပုံတွေက Godzilla ကို သိပ်မထိခိုက်နိုင်လောက်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ရပ်ကွက်အကူအညီ(လူသားတွေရဲ့အကူအညီ) ဒါမှမဟုတ် ပစ္စည်းအကူညီတွေ လိုအပ်မယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။
physical power တွေကို ယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Godzillaနဲ့ Kong တို့ရဲ့ အားသာချက်နဲ့ အားနည်းချက်တွေက တစ်ကောင်ကိုတစ်ကောင် counter ဖြစ်နေတဲ့ သဘောမှာ ရှိနေပါတယ်။ Kong က Godzilla ထက်ပိုပြီး သွက်တဲ့အတွက် အရှောင်အတိမ်းပိုကောင်းပြီး အတွက်အချက်ပိုကောင်းပါတယ်။ Godzilla အတွက် အားသာချက်ကတော့ တစ်ချက်ဆိုတစ်ချက် Kong ကို ထိခိုက်သွားအောင် တိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။
Godzilla မှာ အနုမြူစွမ်းအင်ရှိပြီး Kong ကတော့ ဉာဏ်ကောင်းပါတယ်။ Godzilla ရဲ့ အနုမြူစွမ်းအင်က MUTO ကို သတ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ Ghidorah ကို ပေါက်ကွဲစေပြီး သူရဲ့ Burning Godzilla ပုံစံနဲ့ သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းကို တားဆီနေသမျှ အရာတွေကို အကုန်ဖျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း Kong က ဉာဏ်ကောင်းတဲ့အတွက် တန်ပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်မှာပါ။
Kong က သေချာတိုက်ခိုက်နိုင်ပေမယ့်လည်း Godzilla က walking tank တစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ Kong က Godzilla ထက် ပိုပြီး ရိုးရှင်းတဲ့ သတ္တဝါ တစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ Kong ရဲ့ ကကြွက်သားတွေရှိပေမယ့် အသားအရေပါးလွှာပါတယ်။ ဒါမယ့် Kong က Godzilla ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ရှောင်ရှားနိုင်တဲ့ အားသာချက်လည်း ရှိနေပါတယ်။
အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေကို ယှဉ်လိုက်ရင် Kong ကနိုင်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းပိုများပါတယ်။ လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ Godzilla vs. Kong ဇာတ်ကားကို Adam Wingard မှရိုက်ကူးထားပြီး ဒီရုပ်ရှင်ကို ရုပ်ရှင်ရုံတွေနဲ့ HBO Max ကနေ ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြသမယ့် နေ့ရက်ကတော့ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့ဖြစ်လို့ ဆက်ဆက်စောင့်ကြည့်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
Movies Read 250 times